> Resource > Video > Windows Kan sameeyey Movie u Mac - Samaynta Fantastic Movies
Sida aynu wada ognahay, ma jiraan wax Mac version rasmi ah Kan sameeyey Window Movie. Laakiin weli waxaad ka heli kartaa Windows kale Kan sameeyey Movie u Mac- Wondershare Fantashow for Mac . By bixinta storyboard, saamaynta guurka horena iyo qalab ku anfacaya in uu u qaabeeyo filimada aad, barnaamijkan la mid ah Windows Movie Kan sameeyey shaqaysaa, laakiin waa fududdahay in aad ka dhigi filimada iyo wadaagaan meel kasta oo aad rabto in aad: Facebook, YouTube, Qalabka telefoonada gacanta iyo wixii la mid ah. Waxaad sidoo kale laga yaabaa in ay dareentay in: waa mid aad u la jaan qaada Mac OS (10.8 ka mid ah) iyo macruufka oo siinaya qaar ka mid ah presets filaayo in waxyaabaha Apple sida iPad, iPhone oo dheeraad ah. Sidaa daraadeed, waxaad:
Hel 200+ Hababka filimka lacag la'aan ah oo la sameeyo filimada il-dhisayaa in daqiiqo.
Jiid jeedi fikrado, si fudud oo dhakhso ah.
Hayso diyaariyeen ah ee Intro iyo credit marto oo ha idin stylishly keento filimka iyo shubay.
Si toos ah gubi filimada in DVD disc aan iDVD.
Halkan aynu arki qaar ka mid ah sifooyinka ugu muhiimsan ee this Window Kan sameeyey Movie u Mac. Waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa oo ay isku day ah:
Windows Kan sameeyey Movie u Mac, guur ma aha oo keliya Simple
Sida ugu wanaagsan ee Windows Movie u dhiganta G Mac, Fantashow for Mac awood u qof guriga si ay u abuuraan filimada xirfad-raadinta waqti. Shuqullada aad la abuuro ma aha oo keliya kala guurka fudud u dhexaysa bogagga. Halkii, oo ay tahay, filimada uu Hollywood-style in qoyskaaga iyo saaxiibadaa la yaabi doonaa.
Windows Kan sameeyey Movie u Mac: Styles Movie la dhalaalayay in aad u sheegto Story Own
200+ Hababka filim cajiib ah munaasabadaha kala duwan waxaa lagu bixiyaa in aad neefsato weli sanamyadiinna nolosha. All inaad samayso waa dooran Hababka aad jeceshahay iyo sawiro jiitaa-n-dhibic, video iyo music. Markaas filimada aan caadi ahayn oo noloshaada waxaa loo abuuray in dhowr daqiiqo!
Windows Kan sameeyey Movie u Mac: Retouch Your Movies sida aad jeceshahay
Movies Your, taada! Halkan set buuxda oo qalab tafatirka adag sawiro iyo videos aad diyaar u tahay in aad isbeddel ku samayn karto. Ku dar qurux galay / credits, xaalkaa photos / videos si gaar ah ula qalabka tafatirka, oo aad ugu qortid cod u gaar ah - dhigi masterpiece ah waxaa ka hawl yar ka badan abid.
Windows Kan sameeyey Movie u Mac: Share Movies meel
Movies la sameeyey si ay u wadaagaan. Iyadoo Windows Kan sameeyey Movie u Mac, waxaad si toos ah gali kartaa filimada si aad u YouTube iyo Facebook. High Qeexid sidoo kale waa la heli karaa. Ka sokow, fursadaha la wadaago waa dhammaadka lahayn. Waxaad wadaagi karo TV by in DVD gubanaya, dhoofinta sida filimada QuickTime inuu ka ciyaaro qalabka Mac iyo Apple sida iPhone, iPad, iPod iyo. Kaliya filimada fantastik ah oo ay wadaagaan qoyska iyo saaxiibada si fudud.
Bravo. Windows Kan sameeyey Movie u Mac yahay ee farahaaga. Isku day ama waxa hadda soo iibsadaan.
Xalinta Dhibaatooyinka socon u wmv Files